Marka ay timaado in si buuxda tirtiro xogta iPhone aad, qalabka oo keliya in ku filan tahay ool ah si ay shaqo ugu samayn la ah si kaamil ah u hesho waa SafeEraser by Wondershare. Si kale haddii loo dhigo, Wondershare SafeEraser kuu ogolaanayaa inaad masixi xogta oo dhan ka iPhone, sidaas suuragelinayo in aad u Wakiil aad telefoon off iyadoo aan cabsi ka qabin in aad macluumaad xasaasi ah u gaysato dadka aan la ogalayn.
Sidee si joogto ah u tirtirto xogta ka iPhone in tallaabooyinka
Si aad u soo saarto xogta aad ka iPhone si joogto ah, waxaad raaci kartaa fariimaha uu ku siiyo sida hoos ku qoran:
Isticmaal links kor ku soo bixi version saxda ah ee Wondershare SafeEraser sida your computer.
Ku rakib SafeEraser aad kombuutarka la isticmaalayo habka loo xirxiro si joogto ah.
Marka sameeyo, double-riix icon toobiye ay ku abuurtaan SafeEraser.
Isticmaal cable USB xogta in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombuutarka.
Sug ilaa SafeEraser Wondershare rakibtay darawallada loo baahan yahay si aad u iPhone.
Mar walba waa dhameystiran yahay, ka interface ugu horeysay, riix masixi All Data button (wakiil khada ka badan calaamad screen mobile).
On suuqa kala socda, riix Dhexdhexaad link (ama HyperLink kasta oo kale waa in la joogo) ka Level Security qaybta.
Laga soo furay Settings uu furmo suuqa, guji si loo xusho High button radio si ay u sameeyaan xogta tirtirayaa irrecoverable. (Leave goobaha ay dhawrsan haddii High horeba la doorto).
Back on furmo suuqa hore, oo duurka ku heli karo, nooca tirtirto.
Oo salka uu, guji masixi Hadda aad u bilowdo hawsha erasure xogta ku saabsan iPhone.
Close Wondershare SafeEraser marka loo sameeyo.
Guuleysatey aad iPhone.
Features kale ee muhiimka ah ee ay bixiyaan Wondershare SafeEraser
Waxa intaa dheer in tirtiro dhammaan xogta ka iPhone, Wondershare SafeEraser kale oo uu leeyahay muuqaalada kale ku ool ah oo muhiim ah in aad u ogolaato in nadiifinta aad telefoon iyo hagaajin lahaa hab sahlan oo dhakhso ah. Astaamahani waa ay bixiyaan Wondershare SafeEraser waa:
Masixi tirtiray Files - Tani waxay ka caawisaa si joogto ah aad u baabbi'in faylasha tirtiray sidaas mar dambe ma ay noqon recoverable xataa iyadoo la isticmaalayo qalab kasta oo xoog leh soo kabashada xogta.
Space Saver - wuxuu kuu ogolaanayaa inaad cadaadin oo sanamyadeedii ku kaydsan ee iPhone ayaa lagu kaydiyo. Iyadoo sawirada Tifaftirayaasha sida, meel disk ka badan waxaa ay kor u sii daayay in aad isticmaali karaa ujeeddooyin kale.
1-Guji Nadiifinta - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nadiifiso dhammaan faylasha junk iyo barnaamijyadooda la isticmaalin ka iPhone oo bilaash ah ilaa xaddi wanaagsan ee meel lagu kaydiyo.
Talooyinka Ilaalinta Your iPhone Nadiifi
Marka laga reebo tirtiro dhammaan xogta ka iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser, waa in aad sidoo kale nadiif ah ka soo data junk aad iPhone aadan si in aad tirtiri oo dhan xasuusta in meesha ugu horeysa. A dhawr talo oo kaa caawin kara in la eego waxa ay kala yihiin:
Xidhitaanka Apps Furtay
Haddii aadan u billaabeen aad iPhone in muddo ah oo ku Furi barnaamijyadooda dhowr ah oo kulan tan iyo markii qeybtii labaad la soo dhaafay, barnaamijyada furay baabbi'iyee qadar badan ee xasuusta iyo dhalin badan oo files junk marka socda ee asalka ah. Xidhitaanka barnaamijyada sida hagaajinaysaa waxqabadka aad iPhone. Waxaad awoodi kartaa double-saxaafadeed button Home ah, oo ka jaftaa iyo mari kasta oo ka mid ah ragga calanka u soo bandhigay kor in ay xirto app baahisey socda ee asalka ah.
Nadiifinta Browsing Taariikhda iyo Website Data
Haddii aad isticmaasho iPhone si ballaadhan u dhirta web iyo sameynta hawlaha online kale, waxaa muhiim ah in aad sii nadiifinta taariikhda dhirta iyo xogta website ka xusuusta aad telefoonka ee. Haddii loo maleeyo in aad isticmaasho oo kaliya Safari aad iPhone, si aad u samayn kartaa adigoo u socda Settings> Safari> Clear History iyo Website Data> Clear History iyo Data . Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacdo kasta oo kale oo browser web la geliyo telefoonka iyo sidoo kale aad u isticmaasho fankooda, waxaad u baahan kartaa in la raaco nidaamka ku haboon in ay nadiifiso taariikh iyo macluumaad kale oo qashinka ka xusuusta aad iPhone ee.
Uninstalling ka Apps iyo Games
badan oo Chine dhinac saddexaad ee iPhone sii isticmaalin markii ugu dheer iyo qaar ka mid ah yihiin malaha marnaba isticmaalo oo dhan. Waxa ay noqon doontaa kuwa caqliga leh inay ka saarto barnaamijyadooda sida laga aad telefoon oo bilaash ah ilaa meel lagu kaydiyo qaar ka mid ah. Sidoo kale, mararka qaarkood ku rakiban kulan iyo barnaamijyadooda si joogto ah loo isticmaalo la abuuro xog junk aad iPhone ee kaydinta. Uninstalling ka dibna reinstalling barnaamijyadooda sida / kulan ilaa siidaysay qadar badan oo ah meel bannaan oo ku saabsan telefoonka. Waxaad meesha ka saari karaan barnaamijyadooda / kulan ka iPhone oo ag maraya in Settings> General> Isticmaalka> Maamul Kaydinta , ka dibna laga faaiidaysanayo app ee aan la isticmaalin oo laga faaiidaysanayo ka tirtirto App button.
Cadaymihii ku jira oo dhan iyo Settings
Marar badan, waxaad la kulmi kartaa isagoo iPhone si buuxda u waayey ilaa inta weyn ee xogta junk iyo goobaha dumis ah in aadan dib u default laaban karo. Daadsanaanta noocan oo kale ah ayaa sidoo kale mas'uul ka yahay isticmaalka lacagta badan ee meel disk aad iPhone. Resetting oo dhan ka kooban, oo saldhig oo aad iPhone si fudud ilaa siidaysay bannaan oo kuu ogolaanaya in aad isticmaali ay kaydinta fiican loogama. Waxaad dib karo ka kooban oo saldhig oo aad iPhone ka Settings> General> celi> masixi ku jira oo dhan iyo Settings> masixi iPhone.
Isticmaalka Qalabka Management Disk-Party Saddexaad
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa wax kasta dhinac saddexaad disk, kaydinta, iyo qalab ku ool ah maamulka batari sida Wondershare SafeEraser iyo Battery Doctor iyo isticmaalin habka habboon in la nadiifiyo ilaa meel disk iyo tayadoodii isticmaalka batari aad iPhone.
Inkastoo ay sahlan tahay in la sameeyo, nadiifinta xogta oo dhan ka iPhone waa in la qaadaa sidii xalka ugu dambeeya markii lagu fikirayo oo loo hagaajin karo telefoonka ee. Hababka kale sida nadiifinta xogta webka iyo Author taariikhda, compressing xogta lagu kaydiyaa, ku dhow barnaamijyadooda asalka, ama la tirtiro barnaamijyada aan la isticmaalin ka iPhone in mudnaan la siiyo in ay dhowraan hufnaanta aad macluumaad iyo in ay ka fogaadaan sababaya maqal la'aan xogta shil si. Si kastaba ha ahaatee, haddii tirtiro dhammaan xogta ka iPhone noqdo muhiim ah, ku tiirsan qalab ku kalsoon tahay sida Wondershare SafeEraser noqon lahaa bet ugu wanaagsan.
> Resource > Clean-up > Sidee baad Clear All Data ka iPhone ah